पालुङ्टार ७ मा प्रथम वडा कप शुरु, पहिलो दिन २ खेल सम्पन्न – गोर्खा संसार
पालुङ्टार ७ मा प्रथम वडा कप शुरु, पहिलो दिन २ खेल सम्पन्न
गोर्खा संसार २०७६, ३ माघ शुक्रबार ०२:०३
माघ २, गोरखा ।
पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं.७ मा रहेको च्याङलीमा प्रथम वडा कप फुुटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । उदघाटनकै दिन –माघ २ गते) बर्षाका बाबजुद पनि २ खेल सम्पन्न भएका छन् । आयोजक च्याङ्ली स्पोट क्लब र माझीगाउँ युवा क्लब बीच भएको खेलमा २ — ० गोल अन्तरले च्याङ्ली स्पोट क्लब विजयी भएको छ । त्यस्तै दोस्रो खेल खत्रीटार युवा क्लब र खाल्टेधारापानी युवा क्लब बीच भएको खेलमा ४ — ० गोल अन्तरले खत्रीटार युवा क्लब बिजयी भएको छ ।
वडा नं. ७ कार्यालयबाट खेल क्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट खेल सञ्चालन गरिएको खेलको उदघाटन वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथिको रुपमा खेलको उदघाटन गर्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले युवा तथा खेलाडीहरुलाई सदैव आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । च्याङ्ली स्पोर्ट क्लबका अध्यक्ष सन्तोष थापाको अध्यक्षतामा भएको उदघाटन कार्यक्रममा क्लबका कोषाध्यक्ष शुशीला श्रेष्ठले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो । जसमा क्लबका उपाध्यक्ष विपिन केसीले खेलका नियमहरुको बारेमा जानकारी दिनुभएको सो कार्यक्रमको सञ्चालन सरोज कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
सो फुटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद रु. २० हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र र दोश्रो हुनेले नगद रु. १० हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन भने साथै उत्कृष्ठ खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता तथा उत्कृष्ट गोलरक्षकलाई ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने क्लबका अध्यक्ष सन्तोष थापाले जानकारी दिनुभएको छ । माघ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो खेलमा वडाभित्र रहेको विभिन्न टोलहरुबाट १३ टिमको सहभागी भएको क्लबले जनाएको छ । खेल नक आउट सिस्टमबाट खेलाइएको छ ।
बन्दकाे पूर्व सन्ध्यामा विस्फाेट, ४ काे मृत्यु बन्द कडा हुने संकेत
२०७६, १३ जेष्ठ सोमबार ००:४७
कोरोना रोकथामका लागि सहिदलखनद्वारा रिचार्ज देखि विमासम्मका निर्णय
२०७६, २० चैत्र बिहीबार १४:३२
रञ्चाेक जीप दुर्घटनामा १३ घाइते, घाइतेहरूलाइ हेलिकाेप्टरबाट काठमाण्डाै पुर्याइयाे , घाइतेकाे नामावलीसहित
२०७६, २७ फाल्गुन मंगलवार १४:५९
पालुङ्टारमा हालसम्म २७७ जनाको कोरोना परीक्षण, १ जनाको ज्यान गयो ः बिस्तृत बिबरण हेर्नुहोस
२०७७, ३ श्रावण शनिबार २०:२३
सिमा नाका कडाइकाे निरीक्षण गर्दै गाेरखाका एस.पि. गुरूङ
२०७७, ११ भाद्र बिहीबार १९:५९
अनलाइनकर्मी हिरालाल आचार्यमाथि भरतपुर नगर प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहारको प्रेस युनियन चितवनद्वारा भर्त्सना